भारत पढ्न पठाएको लक्काजवान छोरो घर फर्किदा यसरी छोरी भए ! [लिंगसमेत छैन] « The News Nepal
भारत पढ्न पठाएको लक्काजवान छोरो घर फर्किदा यसरी छोरी भए ! [लिंगसमेत छैन]
काठमाडौं । भारत जाने, त्यहि पढ्ने अनि केही कमाएर पठाउने । यहि आसमा माल परिवार*ले ६ वर्षअघि छोरालाई विदाई गरेको थियो । जसै छोरा फर्किए, अहिले परिवारको होसवास उडेको छ । गाउँले अचम्मा छन् । कृष्णपुर नगरपालीका–१, दोमिल्लाका सुरेन्द्र माल पहिले जस्तो रहेनन् । नाम फेरीएको छ अहिले उनको नाम प्रियंका हो ।
हाउभाउ, चालचलन र पहिरन दुरुस्तै छोरी मान्छेको । लिंगसमेत काटिएको छ । भारत पस्दा १८ वर्षका# थिए । त्यहि दुई वर्षअघि जबर्जस्ती उनको लिंग काटिएको हो । तेस्रोलिंगीहरुको समुहले लिंग काटिदिएको सुरेन्द्रले बताए । त्यसपछि उनलाई केटीको पहिरनमा विभिन्न नाचगान र शुभकार्यमा ताली बजाउन, नाच्न लगाइयो ।
रेलवे स्टेसन र वसपार्कमा माग्न लगाइयो । सुरेन्द्रका अनुसार मेरठ बस्न इलियास नामका व्यत्तिले उनको यो अवस्था% बनाएको हुन् । इलियासले नै उनको कमाइ खान्छन् । मागेर ४०–५० हजार हुन्थ्यो, त्यो सबै उसैले लैजान्थ्यो, न्याय माग्दै मंगलवार जिल्लाप्रहरी कार्यालय पुगेका सुरेन्द्रले भने, मलाई माग्ने बनाउनकै लागी लिंग काटेर फाल्न लगाइयो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।